Mifandraisa aminay - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Adiresy: No.999 Fushan Road, faritra ara-toekarena Xiaolan, Tanànan'i Nanchang, Jiangxi 330200, PR China
Alatsinainy-alahady: 24 ora an-tserasera
Izy io dia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy fitaovana fitsaboana. Izy io dia orinasa iray an'ny tompon'ny Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (fanafohezana: Sanxin Medical, kaody tahiry: 300453), miaraka amin'i Yunnan Sanxin miorim-paka ao Yunnan dia hanampy amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fitsaboana eo an-toerana sy ny serivisy fitsaboana; Mandritra izany fotoana izany dia hanao asa tsara izy amin'ny maha "tetezana" ho an'ny lamina Sanxin Medical any atsimo andrefana, manome taratra an'i Azia atsimo sy Azia atsimo atsinanana. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny faritr'i Kirin ao amin'ny Anning Industrial Park, Kunming City, faritanin'i Yunnan, miaraka amin'ny velarantany mihoatra ny 60.000 metatra toradroa; Izy io dia mamokatra andiana fampidirana avo lenta avo lenta sy vokatra andiany fanadiovana ra.
Orinasa teknolojia avo lenta nasionaly manokana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ary fanohanana ara-teknika ny andiam-pitsaboana hemodialisis ny fitaovana fitsaboana. Izy io dia mpamatsy fitaovana hemodialisis mandroso iraisam-pirenena.
Niorina tamin'ny volana Aogositra 2018, miaraka amin'ny renivohitra voasoratra anarana 12 tapitrisa yuan, dia manampahaizana manokana amin'ny fanomezana trano fanatobiana entana, fizarana, fitantanana rojoboky ny serivisy ary serivisy lojika hafa ho an'ny orinasa mpamokatra fitaovana sy orinasa miasa. Ny orinasa dia miorina amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Xiaolan nasionaly ary sampana iray an'ny Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (kaody stock: 300453).
Ny orinasa dia mirotsaka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary fitantanana ny fitaovana fitsaboana; ny orinasam-panafarana akora tsotra sy fanampiana, fitaovana mekanika, fitaovana enti-miasa, kojakoja fanampiny ary teknolojia mifandraika takiana amin'ny famokarana sy ny fikarohana siantifika an'ny orinasa, ary ny fanodinana ireo akora hafarana ho an'ny orinasa.
Ningbo Filal Medical Products Co., Ltd. dia orinasa manokan-tena amin'ny R&D, famokarana ary fivarotana vokatra fandidiana kardothoracic azo ampiasaina. Izy io dia mamokatra sivana rà azo ampiasaina, fanasivanana microembolisme azo ampiasaina, ary havokavoka fo azo ampiasaina. Ny fonosana fantsona extracorporeal (fantsom-pandrefesana extracorporeal), fitaovana fanosotra kardinaly mangatsiaka ary vokatra hafa dia amidy amin'ny hopitaly lehibe manerana ny firenena, ary nampiasaina tamin'ny klinika tany amin'ny hopitaly maherin'ny 300, ary nahatratra vokatra tsy irina avokoa. Ny kalitaon'ny vokatra dia eo amin'ny tsara indrindra amin'ny indostria ary manana laza tsara eo amin'ireo mpampiasa.
Sichuan Weilisheng Medical Technology Co., Ltd. ("Sichuan Weilisheng" raha fintinina), natsangana tamin'ny taona 2018, dia orinasa mandroso manokana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy fitaovana fitsaboana. Sichuan Weilisheng dia sampana iray an'ny tompon'ny Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (kaody stock: 300453). Taorian'ny lamina fampandrosoana ny indostrialy Sanxin avy any atsimo ka hatrany avaratra, dia manana lamina stratejika indostrialy atsinanana sy andrefana hafa izy, miantehitra amin'i Chengdu Ho ivon-toeran'ny hetsika "Belt and Road", manolo-tena izahay ho lasa mpiasan'ny sehatra indostrian'ny fanadiovana rà miaraka amin'ny fandrosoana. fanavaozana, faharanitan-tsaina ary kalitao, fanamafisana ny fitaomana iraisam-pirenena an'ny marika nasionaly.